Hogaamiye-koxeed Shariif Xasan; Baarlamaanka waa budo gooni u tuman | KEYDMEDIA ONLINE
Hogaamiye-koxeed Shariif Xasan; Baarlamaanka waa budo gooni u tuman
MUQDISHO(KEYDMEDIA) Gudoomiyahii hore ee Ex Baarlamaanka TFG oo haatan isku badalay hogaamiye-koxeed, Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa ku haminaaya inuu madaxweyne noqdo ayaa sheegay in Baarlamaanka Doodihiisa aysan jirin cid ka hor imaan karta isla markaana wixii go’aan ah ay iyagu xaq u leeyihiin.
“Baarlamaanka iyagaa umadax banana dhamaan go’aanada, mana jirto cid kadaba hadli karta, wadamadii caalamka ee aan la soo kulanay midkoodna ma soo dhaweyn xiliga korarsigeena laakiin go’aankeena waa noo gaar” sidaa waxaa yiri shariif Xasan.
Waxaana hadalka Shariif Xasan uu u muuqdaa mid jawaab u ah go’aankii golaha xukuumadda ay ku sheegeen in dhamaan hey’adaha dowlada xili jiritaankooda min halsano ay ku darsadeen.